MSF waxa ay dhaawacyo ku daweyneysaa Guriceel - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
03 Juunyo 2010: Ka dib iskudhacyadii dhowaan ka dhacay gobolka Galgaduud ee Soomaaliya, ayaa MSF waxa bukaannada dhaawaca ah ay ku daweyneysaa cusbitaalka Istarliin ee ku yaalla Guriceel. Cusbitaalkan 80-ka sariirood leh ayaa mar walba ay badi qaybihiisu ku dhowaayeen in ay buuxaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin bukaanno laga daweynayo nafaqo-xumo, xiiq-dheer iyo jadeeco.
Dhammaadkii Abriil ayaa MSF waxa ay olole tallaal ka bilowdey Guriceel iyo deggaannada ku hareereysan. Ilaa hadda kooxuhu waxa ay 3,937 qof ka tallaaleen jadeeco iyo 2,552 qof oo oo ay ka tallaaleen xiiq-dheer. MSF iyada oo ah urur caafimaad oo bani’aadamnimo waxa ay dhammaan kooxaha ku lugta leh iskahorimaadyada ugu baaqeysaa in ay hubiyaan in dhammaan bukaannada ka kala yimaada degaannada kala duwan ay helaan daryeel caafimaad, iyo in ay ixtiraamaan dhexdhexaadnimada dhismayaasha caafimaadka iyo baabuurta dhaawaca qaada.
MSF waxa ay cusbitaalka Istarliin ka shaqeyneysey ilaa 2006dii. Cusbitaalku waxa uu u furan yahay dhammaan dadka u baahan daryeel caafimaad, iyaga oo aan loo eegeyn qabiil, diin ama siyaasad.
MSF waxa ay si joogto ah ay uga shaqeyneysey Soomaaliya ilaa 1991 waxaana ay maanta joogtaa siddeed gobol oo kala ah: Banaadir, Baay, Hiiraan, Galgaduuud, Jubbada Dhexe, Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo Mudug.MSF dowladina kama qaadato wax maaliyad ah oo ay ku fuliso hawlaheeda Soomaaliya ay ka waddo, iyada oo dooratey in ay ku tiirsanaato deeqo ay ka hesho shakhsiyaad gaar ah.
Tags: dagaalo, Galgaduud, guri ceel, Gurmad deg-deg, talaal